Afrika: Mitodika Amin’i Afrika Andrefana Ny Jirobe Noho ny Dingana Manasa-dalana Amin’ny CAN 2012 · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Jane Ellis
Voadika ny 10 Febroary 2012 6:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, Français
Telo amin'ireo ekipa efatra sisa tavela amin'ny CAN 2012 amin'ny fotoana anoratana [Talata 7 Febroary 2012] no avy any Afrika Andrefana: Cote d'Ivoire, Mali ary Ghana dia tafakatra hilalao amin'ny fifanandrinana amin'ny dingana manasa-dalana ny Alarobia 8 2012. Lalaovina any Bata, Ginea Ekoatoraly (Ganà) sy any Libreville, Gabon (Mali vs Cote d'Ivoire) ny lalao. Miaraka amin'izy ireo i Zambia, voalohany mba mandray anjara amin'ny dingana manasa-dalana tao anatin'ny 16 taona.
Ny fandresen'i Zambia 3 -0 tamin'ny ampahefa-dalana izay nifanandrinany tamin'i Sodana dia namoha indray ny fanantenana tao anatin'ireo mpanohana. Tifitra avy amin'ilay vodilaharana Stopilla Sunzu tany amin'ny minitra faha-dimampolo, narahina fanindroany avy amin'ny Kapiteny Chris Katongo taorian'ny 66 minitra sy iray hafa efatra minitra talohan'ny nifarànan'ny lalao izay avy tamin'i James Chamanga, no nibatan'i Zambia ny manasa-dalana hatramin'ny 1996.
Nanamarika tao amin'ny www.fifa.com i eggwinedu:
Arahabaina i Zambia. Mendrika izany ianao 🙂 Mety nitranga tamin'ny alahelo feno fahagagan'i Sodana izany (ekipa iray hafa manana traikefa), nefa tena nanaitra izao tontolo izao tamin'ny fahaiza-mandrindra tsara i Zambia. Tohizo fa tsara
Nanampy i silvanorsa7 any Afrika Atsimo:
Miaraka aminao lalandava izahay ry Zambia…. mbola ao anatin'ny lalao ilay firenena iray monja avy any atsimon'i Afrika! Ho ela velona i Chris Katongo
Nibitsika i Vicente Vizo Ngobeni hoe :
@Mahuntsu: Manamaivana an'i Zambia ny olona. #Afcon2012
ary i Sipho Mazibuko namaly hoe :
@msiphola: Mifantoka tanteraka izy ireo, manam-bitana izy ireo. Tsy mahafa-po i Ganà
Mandritra izay fotoana izay, niaro ny toerany teo amin'ny manasa-dalana ireo Elefantan'i Cote d'Ivoire hatramin'ny 1970, nandresy an'i Ginea Ekoatorialy, iray amin'ireo firenena mpampiantrano, 3-0.
Mpankafia an'i Ginea Ekoatorialy mitomany, avy amin'i @Noella_ELLOH
Nandresy ireo Panthers avy any Gabon tamin'ny alalan'ny tifitra mivantana manandrify ny tsato-kazo izay nahazoany fandresena tamin'ny isa 5-4 taorian'ny isa mitovy 1-1 ireo Voromaherin'i Mali:
Nanamarina ny toerany tany amin'ny manasa-dalana ireo Black Stars-an'i Ganà noho i John Mensah sy André Ayew izay nanome azy fandresena tamin'ny isa 2-1 nanoloana an'i Tonizia. Nitarika ny isa tamin'ny 1-1 i Tonizia hatramin'ny fotoana fanampiny talohan'ny naharesy azy taorian'ny 10 minitra nanaovan'ny mpiandry tsato-kazony hadisoana, Aymen Mathlouthi, ka nanome fahafahana an'i Ganà hanamarika isa fanindroany.
Nisy rivo-pankalazana lehibe sy nahaliana nanodidina ity fifaninanana ity. Avy any Mali hatrany Zambia, nizara ny fibitahany sy ireo vinavinany momba ny dingana famaranan'ny CAN andiany faha-28, tokony hatao ny Alahady 12 Febroary, any amin'ny Stade de l'Amitié, Libreville, Gabon, ireo mpankafy.
Mpankafy ny Ekipa Ivoriana avy amin'i @Ceschod
Nizara ny fihetseham-pony tao amin'ny Twitter ireo mpankafy [fr]:
@Monsieur__K: Moi je dis la finale c'est Ghana/Cote d'ivoire #can2012
@Monsieur__K: Izaho dia miteny fa i Ganà sy i Cote d'Ivoire no hifanandrina amin'ny dingana famaranana
@Ceschod: Football Africain: qui s'attend comme moi à une finale #GhanaVS #CôtedIvoire, #can2012 ? #afcon
@Ceschod: Lalao Baolina Kitra Afrikana: Iza no miandry ny dingana famaranana tahaka ahy? #GhanaVS #CôtedIvoire
@aliounedia: #can2012 ça sent 1 finale Ghana Côte d'Ivoire … heureusement que yayah est la @miezanezo
@aliounedia: Mihevitra aho fa i Ganà sy Cote d'Ivoire no hifanandrina amin'ny dingana famaranana. Soa ihany fa ao i Yaya Touré @miezanezo
Lasa lalina kokoa i Swithin Swaray tao amin'ny Facebook, nanome ny heviny mikasika teboka ratsy vitsivitsy amin'ny ekipan'i Ganà:
Tsy nahazo ny zavatra ilaina mba handresena ny CAN 2012 ny Black Star….30 taona aorian'ny tsipika, mbola manohy manisa hatrany isika. Tsy fahampian'ny ehvitra mialoha , tsy fanànana daka mandrivorivo, tsy misy mba sahy mitifitra avy eny amin'ny manodidina ny 18 m ry zalahy.
Nahazo ny tsara indrindra avy any amin'ireo mpifanandrina taminy avy i Ganà sy Mali taorian'ireo lalao lava izay nihoatra ny 120 minitra. Hanana ny hery ilaina sy tanjaka ve izy ireo hifanandrinana amin'i Zambia sy Cote d'Ivoire?
Mamaly izany fanontaniana izany ny lalao manasa-dalana ny Alarobia8 Febroary.